yoon - Synonyms of yoon | Antonyms of yoon | Definition of yoon | Example of yoon | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for yoon
Top 30 analogous words or synonyms for yoon
D.O. (အဆိုတော်) ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် သူသည် ဒေသတွင်းအဆိုပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိပြီး S.M. ၏ အဆိုပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရန် မှတ်ချက်ပေးခံခဲ့ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အထက်တန်းကျောင်း၏ နောက်ဆုံး ၂ နှစ်အတွင်း သူသည် S.M.Entertainment ၏ သင်တန်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည် S.M. အဆိုပြိုင်ပွဲ၌ Na Yoon-kwon ၏ "Anticipation" နှင့် Brown Eyed Soul ၏ "My Story" သီချင်းများကို သီဆို၍ ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။
လီကွန်ဟီး သူ့အစ်မများထဲမှ တစ်ဦးသည် LG Semiconductor ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး LG အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံး၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ညီအစ်ကိုတော်သူ Koo Ja-hak နှင့် လက်ထပ်ထားသူဖြစ်သည်။ သူသည် လက်ရှိအချိန်တွင် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး စားသောက်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကြီးကို စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသည်။ သူ၏ ညီမဖြစ်သူ Lee Myung Hee သည် လက်ရှိအချိန်တွင် ကိုရီးယား၏အကြီးဆုံး လက်လီကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့် Shinsegae Group ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် Shinsegae Department Sotre များနှင့် E-Mart များကို ကိုင်တွယ်သည်။ သူ့သမီးဖြစ်သူ Lee Yoon-hyung သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် သူမကိုယ်သူမ သတ်သေခဲ့ပြီး သူသည် သမီး၏အသုဘအား တက်ရောက်ခြင်းမပြုခဲ့ချေ။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် သူသည် တက္ကဆက်ပြည်နယ် Houston မြို့ရှိ MD Anderson ကျန်းမာရေးစင်တာတွင် ကင်ဆာရောဂါစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရင်း အချိန်ကုန်ခဲ့ရသည်။